Etu ị ga - esi nyere ndị na - eme biya aka Weather Pandemic-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Otu esi enyere ndị na-eme biya aka Na-enwe Nsogbu Dị Ọrịa
Ka anyị chee ya ihu: Ọrịa COVID-19 akpatala nnukwu nsogbu akụ na ụba karịa ka anyị tụrụ anya ya. Azụmahịa ebe a na - eme ihe ọ aụ takesụ na - akụ ọkụkụ, anyị ghọtara nchegbu gbasara COVID-19 bụ isi nke ndị ahịa anyị.
Site na ahụmịhe na-arụ ọrụ na-eduga ụdị na breweries, anyị na-ahụ nnukwu ọrụ na-akwado obere brewers craft. Nke a bụ ihe kpatara Coff raara onwe ya nye wepụtara ụlọ obibi ọhụụ ọhụrụ dị ọnụ ala n'oge a ma na-enye obere ọrụ ịzụ ahịa n'efu maka mkpa ọ bụla.
Tụnyere ọdịnala uzuoku ọdịnala, nke ọhụrụ thermal mmanụ kpụ ọkụ n'ọnụ brewhouse bụ ọbụghị naanị nhọrọ ọnụ ahịa dị ọnụ ahịa kamakwa ngwa ọrụ mmekọrịta mmekọrịta dị mfe. Onye Coff mepụtara ụlọ na-emepụta ụlọ iche na 2018 wee bido ugbu a ọgbọ 3 na US.
Anyị na-atụ anya na omume anyị ga-enye aka, anyị ga-ebido nyocha iji chọpụta mmetụta ọ nwere na obere ndị na-eme biya na China ma wepụta otu ụzọ ga-esi mee. Odika Ebe a soro anyi na Facebook ka ichota ihe ndi kariri, ma obu igwa gi okwu site na anyi aaron@nbcoff.com .
Previous: Novel coronavirus cant kwụsị usoro ndị ahịa
Ọzọ: Usoro Mmepụta maka iwu na Japan